Speed-pịa kwesịrị ekwesị usoro
Polycarbonate a kpụrụ n’ime
Mbughari agụba visor.
Nọmba nlereanya Moutain igwe kwụ otu ebe VM203
Njirimara ike ikuku vents, nkasi obi isi dabara adaba, ala-profaịlụ imewe
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwalite egwuregwu ịgba ọsọ gị, a na-emere gị igwe kwụ otu ebe. Ihe a na-aga n'ugwu niile nwere ezigbo ngwakọta nke ihe na ụdị, na ikuku ikuku na-agbatị na mkpuchi azụ, okpu okpu a na-eme ka ị dị jụụ ma nwee obi ike mgbe ị na-agbagha teerain, na ihe na-egbu ya-dịka visor na-agbanwe agbanwe sppeedDial fit usoro, eme ka ọ a oké oke maka nay anya-ụzọ njem. Dị ka ọ dị taa dị fechaa, igwe kwụ otu ebe dị ogologo karịa nke nwere ike ịnwe nnụnụ saly kamakwa ịrịgo-okpu agha a wuru maka anụrị ugwu niile. Ọ na atụmatụ ụba ala n'azụ mkpuchi na bụ zuru okè kwesịrị ekwesị n'ihi na ihe niile na-ụbọchị ịnya.
Otu polycarbonate in-ịkpụzi nwere visor snape mounts na-eme ka ezigbo mma na ikuku ikuku na-eme ka ọ dị jụụ ma dị mma, usoro profaịlụ dị ala maka njem nzọ ụkwụ ụbọchị niile.
Ike jụrụ site na padding ntupu dị elu na-enye ọ bụghị naanị nkasi obi kwesịrị ekwesị kamakwa ọmarịcha mma na ngwa ngwa ngwa ngwa n'oge ịnya. Na ihe karịrị afọ 15 ahụmahụ nke okpu agha mmepe na rụpụta, anyị succesfully etinyere ọzọ di iche iche nke ákwà ihe maka padding, dị ka antibacterial, achara, TPU enweghị nkebi, silicone na PC / eyi shei lamination padding.
The mkpa webbing na 0.7mm na-fechaa okpu agha na eriri gbaara njigide na tụgharịa-anya ule niile ụkpụrụ na hụ na saftey ịnya. Anyị na-enyekwa ihe ndị ọzọ dị mkpa dị ka mkpa ndị ahịa na-egosipụta, na-adigide ihe, akwa eri na-acha odo odo na eriri ọla edo ejiri akwa.
Anyị na-ejikọta ITW buckle na tri-mkpọchi na sistemụ eriri maka nchekwa dị mma karị ma jiri otu aka na-ahapụ aka nke ọzọ aka iji hụ nchekwa onye ọrụ. The Fidlock na Osmar nkechi bụ maka customization ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa karịa elu fastening usoro maka ngwaahịa gị.
Usoro nhazi ngwa ngwa na-enye ihe kachasị mma, usoro ikuku nke ikuku na jiometrị dị elu na-eme ka usoro ahụ dị mfe, sistemu dabara adaba bụ belt kwesịrị ekwesị, ahụ, pinon na dail rubil, ọ na-eme ka mpempe akwụkwọ dị mfe na ntụkwasị obi maka saftey
Nke gara aga: Helzọ okpu okpu VC301
Osote: Ukpu Bike Mountain VM202
Kasị Mma Igwe Igwe
Cool igwe kwụ otu ebe
Unyi okpu igwe
Mips okpu igwe
Bizọ okpu igwe